KALA GEEYE-CUQDAD AABAHEED! (Sheeko Siyaasadeed taxane ah Q.2) - Caasimada Online
Home Warar KALA GEEYE-CUQDAD AABAHEED! (Sheeko Siyaasadeed taxane ah Q.2)
KALA GEEYE-CUQDAD AABAHEED! (Sheeko Siyaasadeed taxane ah Q.2)
Qaybtii 2aad. Halkan ka arag qeybti 1-aad
Waxaa isu imaanaaya Mulki iyo Hodan oo ah laba gabdhood oo howl kar ah, isla markaana ay ku weeyn tahay soomaali nimada, intii uu afrika ku maqnaa (Kala geeye- Cuqdad aabaheed) koox dhalinyaro aqoon yahano ay kamid yihiin hablahaan ayaa waxeey meel isugu keeneen oo mideeyeen, dhamaan Soomaalida magaaladaan dagan oo aan waligood hal cod yeelan, waxeeyna go,aansadeen in ay yeeshaan midnimo xaga wax wada barida ubadka, wacyi galinta bulshada, meel uga soo wada jeesiga caqabadaha ku iman kara shacabka soomaaliyeed iyo Ayagoo gacan kaliya ah in ay ka qayb qaataan doorashooyinka xisbiyada ka dhisan magaalada iyo wadankaba, kulan kan waxaa wal wal muujisay. Hodan oo uu adeer u yahay (Kala geeye- Cuqdad aabaheed) waxaa dhex martay sheekadaan.
Mulki:- ii waran abaayo caafimaadkaaga ka waran?.
Hodan:- abaayo aad iyo aad ayaan u ladnahay, adiga xaaladaada ka waran?.
Mulki:- aniga caafimaadkeeyga waa sareeyaa, habeen walbana waxaan ka seexan la ahay farxad, maa daama aan helay arintaan waligeey ku hamin jiray.maantana soomaalida degan magaaladeenan ay yihiin ul iyo diirkeed
Hodan:- aniga farxadaas waan qabay laakiin mar qura ayeey isu badashay welwel iyo shaki.
Mulki:- maxaad ka wadaa ma annagaad naga shakiday?
Hodan:- maya ee soo ma,ogid in uu adeerkeey kala geeye soo laabtay!?
Mulki:- oo haduu soo laabtayna waaban tabaayay markii hore oday naga maqan ayuu ahaa wax badan ayuuba nala qaban lahaa.
Hodan:- ( weji murugeysan iyo madax gilgilid yar ka dib) Naa adeerkeey kala geeye ma taqaanide wax badan baa kuugu laaban, ma is weeydiisay intuu magaaladaan joogay maxeey soomaali meel isugu imaan weeyday, mida kale hadaan Kuu sir waramo awoowgeey intuu dhalay iyo inteey sii dhaleen waa boql iyo sodon, laba isa salaanta malaha, waxaana ka danbeeya adeerkeey (kala geeye) ee na keen waan daahnay anigaa warbixin dheer ku siin doona.
Mulki:- Walaaley waaban yaabanahaye waa maxay mucjisadan aad sheegeyso, adeerkaa ma sidan buu ahaa? War illeyn tanoo kale, waaba Nin weynoo oday ahe maxaa helay?!.
Waxaa ku kulmaaya oday kala geeye- Cuqdad aabaheed, saaxiibkiis igu akhri iyo oday muumin waxaana dhex mareeysa dood furan oo kalamaan ah.
Muumin:- maanta waa inaad warbixin naga sii saa wadankii iyo waxaad kala soo kulantay, dawlada cusub, xaallada nabadgalyada iyo rajada bulshada sideey aheeyd.
Kala geeye:- Hadaan warbixin kaa siiyo wadankii waa cadaw ku dhacyoo tuugo kuu ciidamisay, wax is dhaama labada dhinac soomaan arag, hadaan kaaga warbixiyo dawladda waa (NGO) iyo ganacsato dantooda ma,ogiye wax laga sugaayo malaha, nabadna sooma arag iyo wax sheegaayo waa gacantaada ku gabo. Waxa I gaaray hadaad ogaan lahayd anigoo qadeeynaayo ayaa wiil yar buufin uu ku ciyaarayay ka qarxay, markaasaan intaan naxay Suuxay sadex cishaan isbitaalka jiifay, waa bahala galeen, rajo danboo aadis ma, laha hadaan rajada bulshada kuu soo koobana cidina uma maqna ceelna uma qodna, alle unbeey sugaayaan.
Muumin:- kala geeyoow horta adiga oo muxaafid ah waligey ku ma arag wanaag inaad sheegtana kaaga ma baran, mida labaad Soomaaliya maalin walbo ayaa la tagaa lagana soo noqdaa, adiga mooyee wax balaayo sheegayana ma aanaan arag ee xumahan adiga unbaa watee, waxaan ku oran lahaa oday baa tahaye towba dheh oo ha noqonin oday baas abuur ah waadba tahaye!.
Kala geeye:- ( kkkkkkkk) war niyahahoow maan gaabnidaa oo dareen xumidaa soow ma,ogid in wadankii ay la wareegeen, koox la magac baxday (daam jadiid) oo aaneey waxba u ogoleeyn cid aan ayaga aheeyn, adigana aaneey meelna kaaga banaaneen
Muumin: – Anigu cuqdadaas marna ima galeeyso waxaan u fakaraa soomaalinimo,madaxweeynaha, ra,isal wasaaraha, Gudoomiyaha baarlamaanka, golaha wasiirada, xildhibaanada iyo dhamaan umada soomaaliyeed waa wada Walaaladeey, mana ka fakaraayo oo uma dagaalamaayo hebel maxaa wax looga dhigi waayay waxaana isku xisbi nahay ninkii danta umada daryeela.
Kala geeye: – war heedhe ninyahow sidee wax kaa yihiin, ma umadda dantii siyaasadeed ee damu-jadiid loo qeybiyay ururadii,i kalna laga qadiyay baa daryeel ka heleeysaa, war hooy waad indha xiran tahaye bal indhaha fur.
Muumin: – Wacade duulal marqaansan baa ku dul saaran ee nin yahow umadda ha isku dirin hana kala dirin ee deji waallidan aad la duul duuleyso.
Kala geeye: – mar walba muxaafid baa tahay, waxaadna ka shaqeeysaa midnimo, bulshada dhexdeedana anigaa kaa qiimi badan, ogoow hana daalin……La soco qeybta 3-aad
W/Q: Abwaan Cllaahi Bashiir Nuur
Afeef: Argtida sheekadan waxa ay ku gaar tahay qoraaga ku saxiixan